Mpitondra tsy mahavaha olana | NewsMada
Mpitondra tsy mahavaha olana
Par Taratra sur 17/11/2017
Mbola tany misy fanjakana ihany ve i Madagasikara ? Na mba mahatsiaro sy mitsinjo vahoaka ihany ny mpitondra… Amin’izao Repoblika IV izao, matoa mihetsika ny mpitondra, saika misy ho azy manokana hatrany : manohintohina ny toerany sy ny tombontsoany manokana, ohatra, ka ihetsehany avy hatrany; na isehoany amin’ny vahoaka sy ny fiombanambe iraisam-pirenena fa miasa sy mahavita zavatra izy.
Tsy izany anefa ny tena zava-misy, indrindra ny iainan’ny vahoaka ifotony isan’andro vaky. Tsy misy fiovana, ohatra, fa vao mainka miharatsy aza ny tsy fandriampahalemana. Toy izany koa ny fidangan’ny vidim-piainana, indrindra ny vidim-bary. Eo ny ady sy fandrobana tany sy sy eroa, manenika an’i Madagasikara. Manjakazaka amin’izany ny vahiny sy ny olona tsy fanta-piaviana. Inona ny vahaolana?
Tsy hita ny tena afitsoky ny fanjakana. Tsy fantatra intsony na miraviravy tanana noho ny fahalemena na mamela ny ratsy hanjaka. Ahoana marina, ohatra, ny dahalo any atsimo manana fitaovam-piadiana vaovao be sy tsara no ho ny an’ny mpitandro filaminana? Mba efa nisy fanadihadiana lalina sy mitohy ny amin’ny halatra taolam-paty ve ? Na tsy mahamaika izany fa tsy manohintohina tombontsoa na ny toerana.
Amin’ny lafiny sasany, ny ataon’ny mpitondra aza no toa manakorontana ny fiainam-bahoka: ahoana ny amin’ny fandrobana tany etsy sy eroa, anjakazakan’ny vahiny? Toa mitazam-potsiny ny fanjakana. Miray tsikombakomba ? Toy izany koa ny amin’ny amboletra amin’ny fitrandrahan’ny vahiny harena an-kibon’ny tany: tsy mazava fa tsy misy fanazavana, tsy misy filazana mialoha na fierana.
Mbola mila porofo ve fa mihafadiranovana sy mihamahantra ny vahoaka amin’izao fitondrana izao ? Tsy misy famahana olana mazava sy hentitra. Ny mahavalalanina, ny fifidianana indray no mahamaika sy zava-dehibe: hanohizana ny efa tsy fanjariana sy tsy fahombiazana. Hanao ahoana?
Hanana ny hambarany ny vahoaka amin’ny fifidianana. Ny fahatahorana izany no mampirongatra ny paipaika politika maloto ? Na ny hazakazaka amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana… Nefa tsy havoaka ny volavolana lalàm-pifidianana tokony hifehy izany.